ဒါကယာဉ်တစ်မကောင်းတဲ့မတော်တဆခုနှစ်တွင်ပြီဆိုရင် Check လုပ်နည်း
ကိုယ်တော်၏ Next ကိုအသုံးပြုယာဉ်ဝယ်နိုင်မီက Check ရာတွင်အကြောင်းသိကောင်းစရာများ
မော်တော်ဆိုင်ကယ်ထိုအ ATV vin နံပါတ်စစ်ဆေးနှင့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်သမိုင်းပြတိုက်အစီရင်ခံစာများ
တစ်ဦးကိုအသုံးပြုမော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အသုံးအများဆုံး ATV ကိုဝယ်ယူတစ်ဦးကိုအသုံးပြုကားတစ်စီးကိုဝယ်ယူဆင်တူသည်, သင်အကောင်းဆုံးစာချုပ်ဖြစ်နိုင်သောရတဲ့ဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်စစ်ဆေးချင်သောအနည်းငယ်သောအရာတို့ကိုရှိပါတယ်. ဆိုင်ကယ်သမိုင်းကိုစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. သင်တစ်ဦးတစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့်တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဝယ်ယူရန်ရှေ့တော်၌မော်တော်ဆိုင်ကယ် vin စစ်ဆေးမှုများလုပ်နေတာဒါကြောင့်အလွန်အရေးကြီးပါသည်သည်အဘယ်ကြောင့်ဤသူကား. သေချာသလောက်ကတော့စစျဆေးဖို့အရေးအပါဆုံးအရာများ၏တဦးတည်းဆိုင်ကယ်ခိုးမှုတစ်ခုသားကောင်မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်. စဉ်းစား,2ယောက်ျားတွေတစ်ဦးဆိုင်ကယ်မှတက်ဆွဲထုတ်နှင့်တစ်ဦးပစ်ကပ်ထရပ်ကား၏နောက်ကျော၌ကန့်ပစ်နှင့်စက္ကန့်ထဲမှာအတူကွယ်ပျောက်စေနိုင်သည်. လူတွေကအမြဲရိုးသားသောမဟုတ်, အထူးသဖြင့်ပြဿနာများနှင့်လည်းဆိုင်ကယ်သို့မဟုတ် ATV အပေါ် liens နှင့်မော်တော်ဆိုင်ကယ် vin စစ်ဆေးမှုများရှိခြင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကူညီပေးပါမည်.
ဒီနေရာမှာတစ်ဦးကမော်တော်ဆိုင်ကယ် vin check သည် Get
တစ်ဦးကမော်တော်ဆိုင်ကယ်မော်တော်ယာဉ်ဖော်ထုတ်ခြင်းအရေအတွက်လည်းထိုသို့ဆိုင်ကယ်မှထူးခြားသည်နှင့်စက်ရုံမှာဆိုင်ကယ်ပေါ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအတွက်ကားများနှင့်ကုန်တင်ကားကဲ့သို့ဖြစ်၏. အဆိုပါ vin များသောအားဖြင့် frame ရဲ့မျက်နှာစာပေါ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်, များသောအားဖြင့်ဖော်ထုတ်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်များကိုတွေ့မြင်ရန်မလွယ်ကူကြောင်းလည်ပင်းသို့မဟုတ်တစ်နေရာရာမှာပတ်ပတ်လည်, နှင့်လည်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်တစ်နေရာရာမှာအင်ဂျင်. သငျသညျမှာအားလုံး frame ကိုအပေါ်တစ်ဦး vin number ကိုရှာမတှေ့နိုငျလြှငျ, အကြှနျုပျတို့သညျလုံးဝကြောင်းအထူးသဖြင့်စက်ဘီးကိုရှောင်လွှဲနေဖို့ကြောင်းအကြံပြုမယ်လို့. ဆိုင်ကယ် salvaged နိုင်သို့မဟုတ်အချက်တစ်ချက်မှာစုစုပေါင်းပြီနိုင်ပါသည်.
မော်တော်ဆိုင်ကယ် vin စစ်ဆေးမှုများလုပ်နေတာအားဖြင့်သင်တို့ကိုလွန်ခဲ့သည့်အတွက်ဆိုင်ကယ်ပိုင်ဆိုင်သည့်ခဲ့သူထွက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, နှင့်ငွေစုငွေချေးကနေဒါမှမဟုတ်ဖြစ်နိုင်သည်စက်ပြင်ကနေစက်ဘီးဆန့်ကျင်လီယန်ရှိတယ်လျှင်. ဆိုင်ကယ် purchasing ရှေ့၌သင်တို့လည်းဆိုင်ကယ်အာမခံထားရန်သင့်ကုန်ကျမည်ဘယ်လောက်များအတွက်ကိုးကားရဖို့အာမခံကု​​မ္ပဏီများအဖို့ vin number ကိုပေးနိုငျသ.
ဆိုင်ကယ် vin စစ်ဆေးမှုများလည်းအဆုံးအဖြတ်အတွက်သင်ကူညီခြင်းနှင့်ဆိုင်ကယ်သို့မဟုတ် ATV အခိုးခံရမဟုတ်ကြောင်းသေချာပါအောင်လိမ့်မည်. သင်တစ်ဦးအခိုးခံရမော်တော်ဆိုင်ကယ် vin စစ်ဆေးမှုများပြုပါအခြားသောလမ်းသင့်ဒေသခံရဲဌာနနှင့်အတူစစျဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်. အချိန်အများစုမှာသူတို့သည်ဤသင်လုံးဝအခမဲ့ preform လိမ့်မည်ဟုတစ်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်, သင်ပြုဘူးသည်ကိုစစ်ဆေးမှုများဖို့ရက်ချိန်းအချိန်စာရင်းရှိစေခြင်းငှါကြောင့်သင်တို့ကိုချဌာန၏ဦးရှေ့တော်၌ပဌနာ. သင်သည်လည်းသင်၏ဒေသခံဆ DMV နှင့်အတူစစျဆေးနိုငျ, သူတို့ကစစ်ဆေးမှုများလုပ်ဆောင်ရန်သင့်အားငယ်တစ်ခုအခကြေးငွေစေခြင်းငှါ, ပေမယ့်.
နောက်ဆုံးအနေနဲ့, သင်ကြိုက်နေတဲ့စက်ဘီးကိုရှာပြီးသင်ကအပေါ်တစ်ဦးအစီရင်ခံစာဆွဲသောအခါ, သင်ဆိုင်ကယ်သို့မဟုတ် ATV များအတွက်ငွေသားလွှဲပြောင်း်ရှေ့တော်၌မြဲမြံသောထိုရက်နေ့တွင် vin အရေအတွက်ကိုစေ ဘောင် ခေါင်းစဉ်ပေါ်တွင် vin အရေအတွက်ကိုလိုက်ဖက်.